ma samayn karaa calaamad midabyo badan leh | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sideen u samayn karaa calaamada midabka badan
Iris Gamen | | Tricks
Su'aasha ah in naqshadeeye kasta uu waligiis la kulmay habka naqshadeynta waa, midabka aan la tuurin marka la naqshadeynayo calaamad, ama hab kale, midabkee ayaan ku xidhi karaa calaamadeyda.
Haddii aad rabto calaamad fudud ama mid aad u muuqda, waa inaad raacdaa qaar ka mid ah talooyinka aasaasiga ah markaad dooranayso midabada astaanta. Maqaalkan, waxaanu kuugu sheegi doonaa waxa ay yihiin talooyinkan iyo waxaanu doonaynaa inaanu ku caawino sida loo sameeyo calaamada midabka badan, haddii summadu i waydiiso.
1 Macnaha midabada
2 Tallaabo-tallaabo calaamad midabyo badan
Macnaha la siiyo midabada kala duwan ee aan naqaano, waa macluumaadka nagu hagi kara hababka horumarinta astaanta.
Waxaan hore u ognahay inay jiraan daraasado kala duwan oo ku saabsan macnaha midabka, qaar ka mid ah kuwa kale ayaa ka guul badan. Waxayna tani noo horseedaysaa inaan is waydiino, haddii aan runtii si fiican u doorano midabada calaamada ama haddii, liddi ku ah, waxaan sameyneynaa qalad.
Fikradda ay tahay in aan caddayno waa taas midabku ma soo gudbiyo fikrado ama dareen gooni ah, laakiin waxa lagu soo koobay macnaha guud. Qaar ka mid ah macnayaasha aan siinno midabada ayaa laga yaabaa inay ku xiran yihiin, tusaale ahaan, naqshadeynta shaati iyo dabeecadda qaabka, marka loo eego si toos ah midabka.
Ogaanshaha in macnaha midabku uu ka kooban yahay macnaha guud, waxaan dooneynaa inaan ogaano qiyamka aad ku gaari karto adigoo isticmaalaya midabada kala duwan ee aan ognahay.
Dhammaanteen waan ognahay in midabkani leeyahay dhinacyada togan iyo kuwa xun.. Waxay ku xidhan tahay xamaasad, xoog, jacayl, iwm. Laakiin liddi ku ah, waxay sidoo kale la xiriirtaa xanuunka, dhiigga, khatarta, gardarrada, macnaha xun.
Midabka cirka iyo badda, taas oo kicinaysa xasilloonida, garaadka iyo ugub. Waa xarrago leh waxayna gudbisaa kalsooni iyo cusbayn.
Midabkan waxay calaamad u tahay iftiinka, waxay la xiriirtaa dareenka farxadda, maal, xoog iyo tamar. Waa mid ka mid ah midabada ugu mugdiga badan, maadaama ay sidoo kale leedahay macnayaal xun sida xaasidnimo, khiyaano, xaasidnimo, iwm.
Ku xidhan xamaasad, xamaasad, awood. Adduunka xayaysiisyada waxaa lagu sheegaa inuu yahay midabka ugu niyadsan. Intaa waxaa dheer, waxay la xiriirtaa adduunka cuntada, maadaama maqaayado badan ay u isticmaalaan calaamadahooda.
Dhaqanka reer galbeedka waxa lala xidhiidhiyaa dhimasho, burbur, luntay. Taas beddelkeeda, dhaqamada kale waxay la xiriiraan bacriminta, nolosha iyo koritaanka.
Caddaanka ayaa ka dhigan saafi ah, aan waxba galabsan, ee bulshada reer galbeedka. Nadaafadda, nabadda iyo bikranimada ka sokow. Dhaqannada bariga, waa midabka la xidhiidha dhimashada.
La dhallinta, dib-u-dhalashada, rajada, iyo si dhow ula xidhiidha daryeelka deegaanka. Waa midab dhiirigeliya hab nasasho qoto dheer.
Haddii waxa aad rabto inaad matasho waa xarrago iyo casriyeyn, guduudan ayaa ku caawin doona. Dhanka kale, waxay sidoo kale badanaa la xiriirtaa sirta iyo ruuxa.
Midabka ah macaan, caruurnimo iyo macaan. Dhaqanka reer galbeedka, waxay sidoo kale la xiriirtaa dumarnimada.
Iyadoo ku xiran halka aan ku xiriirno calaamadeena, Bariga ama Galbeedka, midabada ayaa u matali kara hal shay ama mid kale, waxaan had iyo jeer ku celcelinaa, macnaha guud ee lagu soo bandhigay.
Tallaabo-tallaabo calaamad midabyo badan
Laakiin ka waran haddii calaamad ay rabto inay abuurto calaamad midabyo badan, oo ma naqaano sida loo sameeyo.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad noo caddayso waa palette kaabajka aad rabto inaad isticmaasho., haddii ay noqonayso calaamad leh midabada qaanso-roobaadka, haddii ay noqonayso noocyo kala duwan oo midabo kala duwan leh, haddii ay noqonayso midab midab leh, iwm.
Waa muhiim ogow macnaha midabada marka aad la kulanto mashruuc cusub. Mar haddii aad macnayaashan garanayso, waxaad ka caawin kartaa macmiilka go'aan qaadashada oo xitaa ku hagi kartaa jidka saxda ah, haddii uu aad u lumo ama uu sameeyo go'aamo is burinaya.
Our astaanta ayaa noqon doonta mid khiyaali ah, waa dukaan jalaatada, oo loo yaqaan MINIS, waxayna si gaar ah ugu heellan tahay jalaatada loogu talagalay kuwa yaryar oo leh qaabab madadaalo leh. Sidaa darteed waxaan u baahan doonaa midabyo madadaalo leh, u dhow, ogaanshaha macnaha guud ee ay yihiin in ay na qaataan caruurnimada.
El Tallaabada ugu horreysa waa in la furo dukumeenti cusub ee sawir-qaade, oo leh cabbirrada aan rabno, laakiin leh asal madhan. Marka aan furno, calaamadeenu waxay yeelan doontaa calaamadda calligraphic, markaa waxaan aadi doonaa qalabka dhinaca bidix ee shaashadda oo aan doorano qalabka burushka.
Markaan hore u dooranay, waxaan sii wadeynaa inaan ku qorno magaca summadayada shiraacda. Waxaan horey u haynay magaca shirkadda oo qoran, MINIS, tallaabada xigta waa mar kale, ku laabo aaladda popup ka oo hel qalabka qaabka oo guji goobada.
Haddii aan hore u dooranay, waxaanu samayn doonaa zoom ugu badnaan ee suurtogalka ah ee xarafkayaga koowaad waxaanan abuuri doonaa ellipse la mid ah dariiqa burushka, oo aanu ku qornay. Dayax-gacmeedkaas, waxaanu dhigeynaa qaybta hoose ee shiraacyada oo aanu dhigno midab aan rabno ama la weydiisto.
Kiiskeena, sida aad arki karto, tozo blue pastel ah. Talaabada xigta waa dooro goobada aan dhamenay midabaynta oo ku hay kontoroolka+alt furaha kiiboodhkayaga. Waxaan u jiidi doonnaa dhanka midig ee shiraacdeena si aan u nuqulo, anagoo had iyo jeer ilaalinayna xariiq toosan. Waxaan samayn doonaa tallaabadan midabyo badan inta aan haysano.
Markaad haysato, waad sameyneysaa dhagsii furaha W ee kiiboodhkaga oo afar geesle yar oo dhibco leh ayaa u soo bixi doona sida cursor, kani waa qalabka isku dhafka ah.. Doorashadan, waxaanu dooran doonaa mid kasta oo ka mid ah wareegyadayada midabka leh. Si aad u abuurto saamayn nacayb midabo badan leh.
Waa muhiim in wareegyadani ay leeyihiin oo kaliya midab buuxa oo aan ahayn midabka waddada.haddii kale saameyntu kuguma habboonaan doonto si sax ah.
Anaga oo haysana cunsur midabkeena, waxaanu ku dooranaa xarafka ugu horeeya ee summadayada. Waxaan aadeynaa qalabka ugu sarreeya oo aan raadinno Walxaha tab, ka dibna fiyuuska oo guji ikhtiyaarka aad ku beddesho lafdhabarta. Sida aad arki karto midabada ku milmay xarafka.
Si aad sidaas oo kale ula sameyso kuwa kale waxaad haysataa laba waddo, ama koobi oo ku dheji bar midabkan inta xaraf ee aad haysato ama ku koobi xarfo kasta kaas oo aad ku dhammaynayso kuna milmaynayso kan xiga. Waxaan ku talinaynaa doorashada koowaad.
Sidaad aragtay Samaynta calaamad midabyo badan ma aha mid adag gabi ahaanba, tan ugu adag waa wejiga ka horreeya naqshadeynta, taas oo ah baaritaanka qiyamka astaanta iyo macnaha guud, iyada oo aan marxaladdan hore la'aanteed calaamadda iyo badeecada lama fahmi doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sideen u samayn karaa calaamada midabka badan